STARLUX ụgbọ elu na-amalite ụgbọ elu si Taipei gaa Ho Chi Minh City
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » STARLUX ụgbọ elu na-amalite ụgbọ elu si Taipei gaa Ho Chi Minh City
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Nwere ike 17, 2021
Luxurygbọ elu ụgbọ elu okomoko dị njikere ịgbasa ụkpụrụ ọdịnala siri ike ma nye ọrụ mmekọrịta na ọhụụ.
KW Chang - onye ọkwọ ụgbọ ala mara ọkwa na onye isi oche mbụ nke EVA Airways - guzobere STARLUX na Mee 2018
Na Jenụwarị 23 afọ gara aga, STARLUX malitere ụgbọ elu ya na Taoyuan ruo Macau, Da Nang na Penang
STARLUX etinyewo onwe ya n'inwe atụmanya njem njem n'akụkụ ọ bụla nke ọrụ ya
Oge ịmara ihu ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Ho Chi Minh nke Vietnam. N'agbanyeghị ọrịa na-aga n'ihu, ụgbọ elu mmalite si Taiwan, STARLUX ụgbọ elu, malitere ụzọ ọhụụ ọhụụ n'etiti Taipei na Ho Chi Minh City, na-arụ ọrụ njem ụgbọ njem atọ kwa izu.
Site na agụụ ya maka ụgbọ elu, onye guzobere KW Chang - onye ọkwọ ụgbọ ala mara ọkwa na onye isi oche mbụ nke EVA Airways - guzobere STARLUX na Mee 2018. luxurygbọ elu ụgbọ elu okomoko dị njikere ịgbasa ụkpụrụ ọdịnala siri ike ma nye ọrụ mmekọrịta na ọhụụ.
Na Jenụwarị 23 afọ gara aga, STARLUX malitere ụgbọ elu ya na Taoyuan gaa ebe atọ - Macau, Da Nang na Penang. Site na ogige ya na Taiwan Taoyuan International Airport, STARLUX ụgbọ elu ga-ebido ụzọ ụgbọ elu na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Northeast Asia, jiri nwayọọ nwayọọ na-emepe ụzọ ụgbọ mmiri trans-Oceanic na North America. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a Macau, Penang, Kuala Lumpur, Bangkok, Ho Chi Minh City, Tokyo na Osaka. STARLUX na-ewebata 13 nke ọgbọ ọhụụ nke ụgbọ elu ndị njem - A321neo - anọ anọ adịlarị. Companylọ ọrụ ahụ na-ezube iwebata asatọ asatọ A330-900, iri A350-900s na asatọ A350-1000s.
STARLUX etinyewo onwe ya n'inwe atụmanya njem njem n'akụkụ ọ bụla nke ọrụ ya. Oche ya A321neo azụmahịa na klas ghọọ ihe-anụ ọhịa 82-n'ụzọ zuru ezu ewepụghị bed. Ndị njem nọ na klaasị akụ na ụba nwere ike ịnụ ụtọ usoro ntụrụndụ nke onwe ha - nke mbụ n'ụgbọelu dị warara na Taiwan.